Esi atụgharị iPad na ihuenyo nke abụọ maka Mac anyị? | Esi m mac
Esi atụgharị iPad na ihuenyo nke abụọ maka Mac anyị?
Egburu | | iPad, Mac OS X, Noticias, Ngwa ndị ọzọ maka Mac, ọtụtụ
Ruo taa, m ka na-arụ ọrụ na nke m iPad Pro dị ka a imewe ngwá ọrụ, na mgbakwunye na ya kasị nkịtị facet nke ọdịnaya oriri na anyị niile maara n'ụzọ zuru okè. Iji mee nke a, m na-anwale ngwa ọhụrụ ndị na-enyere m aka ịrụkwu ọrụ m.
Ọ bụrụ na m wetere gị nso nso a ngwa iji tọghata iPad anyị na ezigbo mbadamba mbadamba na ezi ụdị Cintiq Site na Atropad, ugbu a, a na m esoro gị kerịta azịza ọzọ dị mma maka nrụpụta ọrụ gị, metụtara usoro okike Apple. Ọ ga-atụkwasịkwara na ngwa ahụ na-akwado iji Windows kọmputa, ma na nke ikpeazụ, enwebeghị m "obi ụtọ" ịnwale, ebe ọ bụ na ọ dị ka na Windows ha na-ezube ime ka ọrụ m dị ka onye mmebe ihe mgbagwoju anya karịa ka ọ dị ugbu a site n'okike, ọ bụ ezie na m ga-ahapụ isiokwu a maka ọzọ Nkeji edemede.
Ana m anwale ngwa ahụ Ngosipụta Duet, ụlọ nke na-enye ohere, dịka m na-ekwu, gbanwee Apple tablet anyị, ma ọ bụ iPad mini, iPad ma ọ bụ iPad Pro, na ihuenyo nke abụọ ma ọ bụ nyocha nke mpụga maka Mac anyị.
a ngwa na-ewe ọhụrụ akụkụ mgbe anyị na-eji ya na iPad Pro,
ebe ọ bụ na ojiji ya na 9,7 ma ọ bụ 12,9-inch ihuenyo, gbakwunyere na nkenke nke Apple Pencil, mee ka ọrụ ya nwee isi ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Ihe onyonyo a nke ụlọ ọrụ biputere na ya gọọmentị webụsaịtị Ọ ga-abụ ihe atụ kachasị mma iji rụchaa nghọta ọrụ Duet Display. Companylọ ọrụ ahụ a na-ekwu okwu, bụ nke ndị bụbu ndị injinia Apple, dị ka ọtụtụ ngwa ndị ọzọ na Storelọ Ahịa Ngwa.
Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ụfọdụ nyocha ndị ọrụ, n'ụdị nyocha nke ngwa a, metụtara ojiji nke oke na iPad, nke n'aka nke ọzọ, ọ ga-adị ka ezigbo igbu oge iji òké na iPad ihuenyo, anyị iPad, na-ewere n'ime akaụntụ ihuenyo mmetụ nke ngwaọrụ ndị a ma ọ bụ Apple pensụl.
Otu n'ime nkatọ ndị a ma ama ga-abụ mkpebi dị ala nke ihuenyo nke iPad Pro ga-egosi mgbe ejiri ya na a MacBook, MacBook Pro ma ọ bụ ihe yiri ya, ebe ọ bụ na mkpebi nke ihuenyo nke Mac anyị dị nnọọ ala karịa nke anyị iPad Pro. Ọ gaghị enye nsogbu ndị a mgbe ejiri ya na ọgbọ ikpeazụ iMacs.
Omume ọzọ gị niile ga - eche ga - abụ nkwụsị ma ọ bụ igbu oge mgbe ị "na - ebugharị" ngwa na kọmputa anyị na iPad; Ọfọn, ke ikpehe emi, lag ahụ ga-abụ ihe na-adịghị mma, ebe ọ bụ na ngwa ahụ na-arụ ọrụ nke ọma n'echiche ahụ n'ihi ọsọ nke a na-ebufe ozi ahụ site na eriri ọkụ anyị nke anyị na-eji kwa ụbọchị iji kwụọ ụgwọ iPad anyị, nke ga-ejikọrịrị kọmputa na ajụjụ maka ngwa ahụ iji rụọ ọrụ. Mara na ngwa a agaghị arụ ọrụ na Wi-Fi, ka a ga - asị na ọ mere Astropad.
A na-ekpebi ihe na-ekpebi na a na ngwa bụ ya price. Site n'echiche m, ọnụ ahịa dị mma nke euro 9,99, na-eburu n'uche ntinye nke arụmọrụ nke ngwa a na-ewere na m. M na-eji ya kwa ụbọchị, na-agbakwunye ya Astropad, abụọ ndị a na-aghọ ezigbo ndị enyi m abụọ mgbe m na-emepụta ụdị ọdịnaya ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị maara ngwa ọ bụla ọzọ ị na-eji gosipụta ihe okike gị ma nwekwuo nrụpụta na nke a, egbula oge ikwu ma ọ bụ kpọtụrụ anyị site na Twitter.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » iPad » Esi atụgharị iPad na ihuenyo nke abụọ maka Mac anyị?
Apple Pay rutere Singapore site n'aka American Express
Apple malitere igwu egwu nke RAM nke MacBook Ikuku mgbe mbata nke MacBook ohuru